အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……. – Shwe Naung
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး…….
N N | November 4, 2021 | Celebrity | No Comments
သူမ ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ အတူ Hello Guys!!! မွေစံ ရဲ့ video အမိုက်စား ကို အမြည်းတင် ပေးလိုက် တယ် လို့ လူမှု ကွန် ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသား ထားခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူမ ရဲ့ အသည်းယား စရာ ပုံစံလေး နဲ့ လှပ နေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ဟာ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်တွေ ပို စေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ်။
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေထဲ မှာ တစ်ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်ပြီး အနု ပညာ အလုပ် တွေ ကို လုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေ ကာ ကြော်ငြာ တွေကို လည်း ရိုက်ကူး လျက်ရှိ နေသူ လေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိ တဲ့ သူမ က တော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို ပါ အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရယူ ထားနိုင် သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော်လေး ဆို ရင်လည်း မမှားပါ ဘူး။
သူမ ကတော့ ယခု မှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေး ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား လေး ပေါ်လွင် နေ ပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေး တွေ ပေးနေ ခဲ့ပါ တယ်။
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အသားအရည်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီးကတော့ စားဝတ်နေရေးအတွက် အဝတ်အထည်တွေကို အွန်လိုင်းကနေ Live လွှင့်ဈေးရောင်းနေခဲ့………..
သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အလန်းစား ဗီီဒယိုလေး……….